Waa Kuwee TOBANKA Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Isniin Ah Loogu Hadal-Heynta Badan Yahay Suuqa Kala Iibsiga? Halkaan Ka Aqriso Liiska Oo Dhameystiran. - Laacib.net
Salamu calaykum waraxmatulaah, Ramadaan Kariim dhamaan akhristayaasha sharafta iyo ixtiraamka naga mudanow ku soo dhawaada barnaamujkeenii tobanka ciyaartoy ee ugu qiimaynta sareeya suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee maanta oo Isniin ah kuwaas oo inta ugu badan looga hadlay suuqa kala iibisaga isla markaana lala xiriirinayo kooxo cusub. Suuqa kala iibisaga ciyaartoyda ayaa si rasmi ah u furmaya 1-da July waxayna koox kastaaba si hordhac ah ugu dadaaleysaa iney hesho saxiixyo cusub.
Inkastoo wararka ugu badan ee ay qorayaan warbaahinta kubadda cagta ay yahiin khilaafka soo kala dhex galay Real Madrid & Cristinao Ronaldo, hadana kabtanka Portugal marnaba sooma galin maanta hadal heynta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Tiemoue Bokayoko oo ka tirsan Monaco ayaa kusii dhawaanaya inuu galbeedka London dago isla markaana ku biiro Chelsea – Blues arinta xidigaan iyadaa ugu sareysa madama lasoo wariyay bishii hore iney heshiis hordhac ah la gaarene.
Alvaro Morata arintiisa wali wey jiitameysaa iyadoo Man United iyo Real Madrid aysan wali isku fahmin lacagaha xidigaan, sidoo kalana waxaa caqabad ku noqon kara doonista Red Devils ee CR7.
Wargeyska Marca ayaa shalay qoray in Real Madrid ay inta lagu jiro isbuucaan soo dhameyn doonto saxiixa Theo Hernandez walow aan la ogeyn sida laga yeeli doono.
Dhinaca kalana M’Baye Niang ayaa mar kale looga gacan haatinayaa Premier League, amaah ayuu ugu ciyaaray Watford, balse markaan Everton ayaa si toos ah u dooneysa iney ula wareegto xidiga Milan.